तरल पदार्थ - मान्छे बीच लिंक
पारंपरिक बुद्धि महिला धेरै महत्त्वपूर्ण श्रवण छाप हो, र पुरुषहरु को लागि छ - दृश्य। तर ethnologists अध्ययन फेला थुप्रै तरिकामा हाम्रो लत शरीर देखि discharged गंध असर छ। महिला - महिला तरल पदार्थ पुरुष र पुरुष आकर्षित।
मान्छे बीच त्यहाँ सचेत excites एउटा अदृश्य बन्धन छ यद्यपि रूपमा। कहिलेकाहीं रोमाञ्चक को सानो आशाले छ। यो सामान्यतया लामो-प्रतीक्षा खरिद गर्न वा केही अन्य, महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण र रमाइलो घटना अघि Committing अघि हुन्छ। तरल पदार्थ - यो यस्तो भावना के गराउँछ छ। भविष्यमा यी पदार्थ गायब र आफ्नो ठाउँमा अरू केही छैन। को सपना र चाहना जीवन ल्याइएको हुँदा यो हुन्छ।
एक पुरुष र महिला केवल तरल पदार्थ भेट थियो जब - यो कार्य गर्न एक विशिष्ट कलमा वृद्धि के दिन्छ छ। फलस्वरूप, भावना सक्रिय विकास र हरेक दिन थप र थप हुँदै गइरहेका छन्। साझेदार प्रत्येक अन्य थप र थप चासो देखाउँछन्।
Balzac अनुसार, भावना हुन सक्छ सामाग्री प्रवाह एक व्यक्ति थप वा कम सक्रिय उत्पादित कुनै पनि तरल पदार्थ को। यो हामी प्रेम को सबै संकेत मा मानव शरीर मा निरन्तर जीव रसायन परिवर्तन गरेर निर्धारण गर्न भौतिक आधार छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं।
कारण विशिष्ट, सूक्ष्म Smells गर्न, विपरीत sexes मानिसहरूलाई आपसमा एक अचेत आकर्षण अनुभव छन्। हाम्रो शरीर मा ग्रन्थीहरूको विशेष पदार्थ स्राव - pheromones। यो पदार्थ को गन्ध को उत्पादन को बढावा प्रेम को हर्मोन endorphins र amphetamines -। तसर्थ, मानव तरल पदार्थ आवेग को अर्थमा, उत्तेजित भएको erogenous क्षेत्र मा संवेदनशीलता वृद्धि, आत्मीयता र यति मा इच्छा बढ्छ।
पनि प्रस्ताव विशेष उत्तेजक छन्। कृत्रिम तरल पदार्थ - समान प्रभाव छ कि पदार्थ हो। तिनीहरूले देखि, उदाहरणका लागि, उत्पादित गर्दै छन् स्पेनिश फ्लाई। यो कीरा पनि स्नायु प्रणाली असर एक शक्तिशाली विष उत्पादन गर्छ। तथापि, साथै, यो बढ्ने libido।
यी औषधिहरू सेक्स समयमा समस्याको अनुभव भएकाहरूलाई बीच उच्च मांग गर्दै छन्। यस्ता कोष अक्सर मानिसहरू घनिष्ठ भावना थप तीव्र र तीव्र बनाउन चाहने द्वारा प्रयोग गरिन्छ। यो निर्देशन निर्दिष्ट अनुप्रयोग लागि नियम तोड्न आवश्यक छैन कुनै पनि मामला मा त अझै हामी यस्तो stimulant को दिल मा कि बिर्सनु हुँदैन, एक राम्रो बलियो विष छ। प्रयोग गर्न सुरु गर्नु अघि आफ्नो डाक्टर देखि सल्लाह लागि अनुरोध गर्न निश्चित हुनुहोस्।
जो तपाईं लगातार तरल पदार्थ उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ सबै भन्दा राम्रो तरिका, - आफैलाई प्रेम छ। यस मामला मा, "प्रेम को रसायन" पूर्ण शक्ति काम गर्नेछ। केही चिपके छैन भने, त्यसपछि तपाईं विशेष उत्तेजक प्रयोग गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई नियमित र वैविध्यपूर्ण सेक्स जीवन र सकारात्मक भावना को एक प्रशस्त तरल पदार्थ को विकास को लागि राम्रो छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ, त्यसैले बढी समय सँगै खर्च गर्न प्रयास गर्नुहोस्। साथै, जीवन धनी, मजा र पूर्ण बनाउन आवश्यकता। त्यसपछि आफ्नो सम्बन्ध राम्रो र राम्रो हुनेछ।
बच्चा को तापमान कसरी कम गर्ने?
सही मुद्रा - स्वास्थ्य र भलाई को ग्यारेन्टी
सुई mesotherapy: अवलोकन, प्रकार, आकार, र समीक्षा
Urinalysis। कसरी लिन र के दर?
कसरी आफ्नो बच्चा संग plasticine सान्टा क्लाउस देखि sculpt गर्न?
1 वर्ष देखि बच्चाहरु को लागि भिटामिन
Alexei Stukov जीवन र पुनरुत्थानको
क्लियरिङ - ऋण वा नगद लेनदेन मा बचत गर्ने क्षमताको सफाई को तरिका?
गोप्य कुरा - यो ... विशेषताहरु गोप्य कुराकानी संगठन
सेतो चकलेट: को संरचना र गुण
रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा अवधारणा: सामाग्री र संरचना
कोरियाली खीरे: गाजर संग जाडो लागि नुस्खा
घर मा काटन sturgeon: व्यावहारिक सल्लाह
पालुङ्गो संग चाटुकर: नुस्खा, समीक्षा